Naya Post Nepal | गौरीशा र सुरजको पहिलो भेटमै चल्यो रु’वाबासी ! अब के यो जोडी जम्छ होला त ? ( भिडियो सहित )
गौरीशा र सुरजको पहिलो भेटमै चल्यो रु’वाबासी ! अब के यो जोडी जम्छ होला त ? ( भिडियो सहित )
टिकटक मा धेरै किसिमका प्रतिभा हरु भएका व्यक्ति हरु देख्न पाइएको छ। ति प्रतिभा देखाउने मध्ये एक हुन् गौरिसा नेपाली। उनि टिकटल मा सर्बाधिक मन पराउने एक पात्र हुन्। टिकटक मा उनले बाचन गर्ने शब्द मा कि आफ्नो कि अरुको कथा लुकेको हुन्छ त्यस कारण उनि सबैको प्यारी बनेकी छिन।
गौरिसा जस्तै अर्का एक व्यक्ति हुन् सुरज घिमिरे। उनि पनि टिकटक मा सबैले मन पराएका अर्का पात्र हुन्। उनले पनि आफ्नै युटुब च्यानल मार्फत साने नेपाली सिरियल प्रसारण गर्ने गरेका छन्।
उनले आफ्नो सिरियल मा आबस्यक पर्ने कलाकार गौरिसा नेपालिलाई सुहाउने हुदा उनि भेट्न पोखरा सम्म पुगेका छन्। यस भिडियो तयार पार्दा सम्म पनि उनीहरुको अभिनय धेरै नै राम्रो भएको छ। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
२०७८ पुष २२, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 251 Views